Sida loo doorto maaskaro loogu talagalay coronavirus?
Ma garanaysaa nooca maaskaro ee ay tahay inaad ku iibsato coronavirus?
Maaskaro dawooyin ah, maaskaro caafimaad, kabo indho indhayn caafimaad, maaskaro ilaalin caafimaad, N95, KN95, 3M, iwm. Marka la eego magacyada waji-bixinnada, dadku way wareersanaayeen oo wareersan yihiin.
Noocyada maaskarada caamka ah waxaa loo qaybin karaa qiyaastii 6 qaybood iyadoo loo eegayo heerka isticmaalka
Maaskaro qalliin caafimaad, maaskaro ilaalin caafimaad, N95, FFP2 ayaa loo isticmaali karaa ilaalinta xarumaha caafimaadka, KN95 looma adeegsan karo xarumaha caafimaadka, laakiin dadka caadiga ah ayaa dooran kara.
Sidee loo doortaa noocyo kala duwan oo waji-duub ah? Maanta, waxaan kuu soo bandhigi doonaa iyaga, ha kuu oggolaado inaad si dhakhso leh u doorato maaskaro kugu habboon.
Maaskaro Maskaxeedka / Maaskaro daryeel caafimaad ah
Maaskaro caafimaad iyo maaskaro daryeel caafimaad ayaa leh heerar qaran, YY0969, inta badanna waxaa naqshadeeya oo soosaara shirkado. Qaab dhismeedkeedu badanaa waa maro aan dhogorta lahayn iyo warqad filter.
Maaskarada noocan oo kale ahi ma dammaanad qaadi karto in ay ku sii fidayaan jeermis-yada bakteeriyada lafaha iyo boodhka, ma gaari karaan karti-sifeynta ee walxaha iyo bakteeriyada, umana horjoogsan karaan in ay ku soo baxaan cudurrada ku dhaca mareenka neef-mareenka.
Maaskaro noocan ah waxay ku xadidan tahay heer gaar ah oo carqalad ku ah farsamo-yaqaanka ka kooban boodhka boodhka ama hawada. Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa daryeelka joogtada ah ee cosbitaalada, iyo saameynta difaacdu aad uma qanacsana.
Maaskaro qalliin oo qalliin
Maaskaro qalliinka caafimaad waa in la soo saaraa iyadoo la raacayo heerka caafimaad ee YY0469-2011. Haddii heerka aasaasiga ah ee shirkaddu dejiso ama uu dhaafo shuruudaha YY0469, waxaa sidoo kale lagu daabacan karaa baakada sare ee maaskarada.
Maaskaro qalliinka ayaa loo qaybiyaa saddex lakab: lakabka biyaha-qaada ee gudaha, lakabka shaandhada dhexe, iyo lakabka biyaha ka baxsan. Saamaynteeda shaandhaynta walxaha aan saliida lahayn waa inay ka badnaadaan 30%, iyo waxyaabaha shaashad ku leh baakteeriyada waa inay ka sareysaa 95 (non-N95).
Waxay ku habboon tahay ilaalinta aasaasiga ah ee shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira, waxay ka hortegi kartaa faafidda dhiigga, dheecaannada jirka iyo kala-baxa, waxayna leeyihiin howlo ilaalin xagga neefsashada ah. Maaskaro qalliin caafimaad ayaa xannibi kara bakteeriyada iyo fayrasyada badankood waxayna yareyn karaan halista infekshannada iskutallaabta ee isbitaallada.
Waxaa badanaa lagu isticmaalaa deegaannada baahida weyn u leh caafimaadka sida rugaha caafimaadka, sheybaarada iyo qolalka qalliinka, oo leh astaamaha amniga oo aad u sarreeya iyo iska caabbinta adag ee bakteeriyada iyo fayraska. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in looga hortago faafitaanka hargabka iyo cudurada neef-mareenka.
Maaskarooyinka 'KN' waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo walxaha aan saliida lahayn. Sida ku xusan shuruudaha cabbirka GB2626, shaandhaynta walxaha aan saliida lahayn ayaa loo qaybiyaa. Waxaa kamid ah, KN90 in kabadan 90% maadada aan saliida aheyn ee ka saraysa 0.075 microns, KN95 waa in kabadan 95% maadada aan saliida laheyn qeyb ka sareysa 0.075 microns, iyo KN100 waa in kabadan 99.97% maadada aan saliida aheyn ee kahoreysaa 0.075 microns.
Waxyaabaha looga baahan yahay masaska noocan ah ee mashiinka mashiinka shaandhada leh ayaa ah in walxaha taabashada tooska ah ee wajiga taabanaya aysan waxyeello u geysaneynin maqaarka walxaha shaandhada maysan wax u dhimeyn jirka bini aadamka. Agabyada loo isticmaalay waa inay lahaadaan awood kufilan mana aha inay noqdaan kuwo xumaanaya ama dhaawacma inta lagu gudajiro adeegga caadiga ah.
Isla taxanaha mashiinka sida KN, iyo taxanaha KP, waa maxay KP?
KN waxaa loogu talagalay walxaha aan saliida lahayn, iyo KP waa maaskaro loogu talagalay walxaha saliida. KP90 / 95/100 wuxuu lamid yahay KN90 / 95/100 gudaha KN.
Maqaariyadaha loo yaqaan "KN" iyo "KP" masks ayaa inta badan ku habboon hawo-mareenka iyo saliida-aan-lahayn ee ay ka kooban tahay wasakhda sida boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo wixii la mid ah oo ay soo saareen birta-birta-birta-birta ah, birta, birta iyo birta, koronto, kiimikooyinka dabiiciga ah, gaaska, dhismaha, iyo qurxinta. . (Xusuusin: waxaa sidoo kale loo odhan karaa maaskarada boodhka)
Maaskaro ilaalinaysa xeelado
Heerka badbaadada caafimaad ee Shiinaha waa GB19083-2010. Ma jiro bayaan N95 ah oo heerkan ah, laakiin kala-soocidda heerka 1, 2, iyo 3 ayaa loo istcimaalay si loo muujiyo heerka karti-marinta shaandhaynta.
Heerka 1 ayaa buuxin kara shuruudaha N95. Si kale haddii loo dhigo, illaa iyo inta maaskaro kasta oo ilaalin caafimaad oo la jaan qaadaya heerka GB19083, runtii waxay gaari doontaa hufnaanta filinka ee N95 iyo KN95.
Farqiga u dhexeeya maaskaro ilaalin caafimaad iyo KN95 ayaa ah in maaskaro ilaalin caafimaad sidoo kale ay leeyihiin “isugeynta dhiigga isku-darka" iyo shuruudaha qiyaasaha xaddiga qoyaanka dusha sare. Saamaynta kahortaga waji-dhaafka caafimaad ee dhiigga, dheecaanka jirka iyo cabitaannada kale ayaa la caddeeyay, laakiin noocyada noocaan ah lama heli karo.
Sidaa darteed, maaskaro noocan ah oo la jaan qaadaya GB2626 looma adeegsan karo qalliinnada caafimaadka, gaar ahaan hawlgallada halista sare leh sida tracheotomi iyo marinka xiidmaha ee laga yaabo inuu buufiyo.
Maaskarooyinka qalliinka ee cusbitaalada waa inay dhamaantood buuxiyaan heerka 1 iyo wixii ka sareeya GB19083. Waxay gaari kartaa 95% shaandheynta, waxayna ka hortegi kartaa galitaanka dareeraha.
Kadib markaan dhaho, dadbadan ayaa waliba isweydiin doona, waa maxay N95?
Noocyo dhowr ah oo waji-duub ah oo lagu soo bandhigay korka, maaskaro caafimaad iyo maaskaro qalliinka qalliinka ah ayaa raacaya heerarka caafimaadka, maaskaro ilaalin caafimaad iyo noocyada KN ayaa raacaya heerarka qaran, N95 waxay raacdaa heerarka Mareykanka.
Maaskarada N95 waxay raacaysaa heerka Ameerika ee NIOSH42CFR84-1995 (Machadka Qaranka ee Nabadda Shaqada iyo Caafimaadka). N wuxuu muujiyaa iska caabin saliid ah 95na waxay muujineysaa soo bandhigida tiro gaar ah oo ka kooban tijaabooyin gaar ah. Fiirsashada walxaha maaskarada ayaa ka yar 95% ka yar fiirsashada walxaha ka baxsan maaskaarka. 95 ma aha iskucelcelis, waa ugu yaraan.
Xaddiga shaandhaynta waxaa loogu talagalay walxaha aan saliida lahayn, sida boodhka, wasakhda aashitada, microorganisms, iwm. Awoodda ay adeegsanayso waa ilaalinta cudurrada faafa ee hawo mareenka ee shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira, iyo ka hortagga fidinta dhiigga, dareeraha jirka. oo kala daadanaya inta hawshu socoto.
NIOSH waxay cadeysay heerarka maaskaro ee anti-particulate-ka sidoo kale waxaa ka mid ah: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, wadar ahaan 9 nooc.
Xusuusin: N — ma ahan saliid u adkeysaneysa, R — saliida u adkeysaneysa, P — saliida u adkeysaneysa.
Shuruudaha farsamada iyo qaababka tijaabada ee labada heer ee masrixiyada KN95 iyo N95 waji-buurka aasaas ahaan waa isku mid, laakiin waxay ka tirsan yihiin heerar qaran oo kala duwan.
N95 wuxuu raacaa heerka Ameerika, halka FFP2 uu raacayo heerka Yurub.
Maaskarooyinka FFP2 waa mid ka mid ah heerarka mashiinka yurubiyanka ee loo yaqaan 'EN149: 2001.' Waxaa loo isticmaalaa adsorb aerosols waxyeello leh, oo ay ku jiraan busta, qiiqa, dhibcaha qiiqa, gaasaska sunta ah iyo uumi-baxa sunta ah, iyagoo ka celinaya inaysan dadku ku neefsan.
Waxaa ka mid ah, FFP1: Saamaynta ugu yar ee shaandhaynta> 80%, FFP2: Saamaynta ugu yar ee shaandhaynta> 94%, FFP3: Saamaynta ugu yar ee shaandhaynta> 97%. Haddii aad u isticmaasho xogtan inaad dooratid maaskaro ku habboon cudurkan, tan ugu yar waa FFP2.
Sheyga shaandhada ee maaskaro 'FFP2 mask' waxaa badanaa loo kala qaybiyaa afar lakab, taas oo ah, laba lakab oo maro ah oo aan dhogor lahayn + hal lakab oo maro ah miro buufin + hal lakab oo suuf gubtay.
Maaskaro ilaalinaysa FFP2 waxay ilaalin kartaa fayrasyo ​​aad u fiican iyo bakteeriyada, oo leh karti shaandhaynta wax ka badan 94%, taas oo ku habboon deegaannada kulul iyo huurka ama ilaalinta muddada dheer.
Su’aasha ugu dambeysay, waa maxay maaskaro 3M ah?
“3M waji-gareynta” waxaa loola jeedaa dhammaan badeecadaha 3M ee lagu magacaabi karo maaskaro. Waxaa loo qaybin karaa seddex qaybood: waji-bixin caafimaad, waji-bixinno waji-dhaaf ah, iyo waji-bixinno diiran oo raaxo leh. Nooc kasta oo maaskaro ayaa leh diirad difaac oo kala duwan.
Maaskaro ilaalin caafimaad 3M ayaa laga sameeyay Shiinaha waana la soo dhoofiyey. Waxay leeyihiin sifooyinka ilaalinta ee maaskaro qalliin caafimaad waxayna qayb ka yihiin maaskaro ilaalin ah. Waxaa loo isticmaalaa cisbitaalada waxayna shaandheyn karaan astaamaha hawada waxayna xannibi karaan dhibcaha, dhiigga, dareeraha jirka iyo dheecaanka.
Mashiinnada 3M-ka ah, kuwa ka bilaabanaya 90, 93, 95, iyo 99 waa waji-bixinno aad u waxtar badan oo loogu talagalay kahortagga sunta waxyeellada leh. Labada 8210 iyo 8118s waxay buuxiyeen shuruudaha ilaalinta Shiinaha ee PM2.5. Haddii aad rabto inaad doorato inaad la kulanto shuruudaha ilaalinta Ururka Caafimaadka Adduunka, dooro 9010, 8210, 8110s, 8210v, 9322, 9332.
Marka tan la arko, miyaad taqaanaa sida loo doorto maaskaro inta lagu jiro cudurka faafa?
1, wuxuu dooran karaa maaskaro qalliin oo caafimaad, iskuday inaad doorato maaskaro qalliin.
2, wuxuu dooran karaa maaskaro aan lahayn waalka neefsashada, iskuday inaad doorato maaskaro aan lahayn waalka neefsashada.
World dagaal! Shiinaha dagaal!